Marisa Monokini & Bikini Set PDF Sewing romance – The Tailoress
musha / Women / Swimwear / Marisa Monokini & Bikini Set PDF Sewing romance
reversible Fully, sarudza micheka zviviri zvakasiyana kuti zvienderane manzwiro ako (uye kuti vanhu vose vanofunga mune swimsuits kaviri sezvo vazhinji!). Gurai zvaida mari rejira vaviri kuwana quanity inodiwa yomukati uye dzokunze swimsuit.
Available mu UK hukuru: 4 / 6 / 8 / 10 // 12 / 14 / 16 / 18. Tapota bvunza kuti sizing chati kuwana saizi zvenyu.
Copyshop saizi: 67masendimita X 98cm
A4 mapeji: 16
Copyshop saizi: 67masendimita X 84cm
Tanga kuzvicherera muenzaniso zvidimbu kuti anodiwa saizi.
Peta crotch nokuda chaiko uye tepi panzvimbo.
Cheka zvose muenzaniso zvidimbu.
Kuisa pfungwa jira uye lining jira KODZERO panhivi pamwe. Kuisa GUSSET pamusoro pamberi Piece lining kukwira crotch musono.
Ndingomubayirira pasi kwakavharwa nenyama kumativi ose musono dzichashivirira kusiya chete nzvimbo nokuda netayi zvishwe yakazaruka.
Musono kuti kwakavharwa nenyama kuti musono mugove uchishandisa Zig-zag Musono. Siya munhu 10cm nzvimbo unstitched sezvinoratidzwa nomufananidzo.
Onai kuti backstitch apo kupedza nokuti 10cm pakakoromoka uye kana kutanga Musono shure.
Peta tai zvose zvishwe hafu.
Shandisa Zig-zag Musono yokusona ari musono mugove.
Kurudyi mativi kunze chete musono mutsetse womukati centre.
Peta hafu lengthways.
Dzinoisa chisungo muzvishwe kupinda pamberi monokini, pakati yomukati uye dzokunze jira.
Hoko Musono kuti musono mugove uchishandisa yakarurama Musono.
Kudhonza monokini KODZERO mativi kunze kuburikidza yakazaruka 10cm nzvimbo.
Peta musono mugove hwomukova mukati. Kuchengeteka kushandisa diki, Loose overhand stitches.
Dzinoisa ushamwari kupinda Zvisungirire muzvishwe monokini wako wazadziswa!
Musono kuti kwakavharwa nenyama kuti musono mugove uchishandisa Zig-zag Musono.